Global Voices teny Malagasy » Taïwan : Nopotehina Ireo Trano Miendrika “OVNI” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Oktobra 2017 6:43 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika (fr) i Norbert Bousigue, Liva Andriamanantena
Sokajy: Taiwan (ROC), Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Sary nahazoana alàlana avy amin'ny bilaogy avant .
Nanazava tao anatin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginy i avant  tamin'ny 3 Jolay 2008 fa eo am-pandrodanana ireo trano malaza miendrika ovni ao amin'ny torapasika fitsangatsanganana ao ambanivohitr'i Taipei, ao Taiwan..
Talanjona tamin'ity famolavolana trano tena miavaka sy mahaliana ity i Lynn  :
Satria tena miavaka ny “ovni” dia nanome sosokevitra ny avant  mba hitahirizana azy ireo ho vakoka ara-tantara.
Mampalahelo raha horavana ireo trano ireo. Heveriko fa tokony hametraka ireo trano ireo ho vakoka manan-tantara ny Vaomieran'ny Raharaha Ara-kolotsaina. Naorina tany amin'ny taompolo 1970 ireo “ovni” ireo, toy izany koa ny Fahatsiarovana Tchang Kaï-chek ,… Tena rafitra maritrano miavaka izy ireo. Tsikaritra fa niezaka niala tamin'ny endrik'ireo tranobe mahazatra tahaka ny lapa ireo mpanao maritrano . Etsy ankilany, tamin'ny faramparan'ny taompolo 1970, vao avy nandresy ny krizin'ny solika  i Taiwan ary nanomboka nampiroborobo ny toekareny. Nampidi-bola bebe kokoa ny Taiwaney ary nihatsara ny fiainan'izy ireo. Mampiseho ny fisian'ny toeram-pialamboly an-dranomasina miaraka amin'ny trano miendrika ovni fa nanam-bola holaniana tamin'ny fialamboly vaovao sy mahaliana ny olona tamin'izany fotoana izany, toy ireo vahoaka any amin'ireo firenena mandroso. Noho izany, hita taratra amin'ny alàlan'ity fanorenana ity ny fomba fiainan'ny olona tamin'ny telopolo taona lasa .
Manome fanazavana ara-javakanto momba ireo “ovni ” ireo i Marta Michałowska sy Fabian Sowiński  raha mahaliana anao izany
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/30/109748/
 Tchang Kaï-chek: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchang_Kai-chek
 krizin'ny solika: http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier
 Marta Michałowska sy Fabian Sowiński: http://rzeczy.net/en_komentuj_96.php